काठमाडौंमा १८ वर्ष माथिलाई जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप दिइने, बिहिबारसम्म लगाइने « Mero LifeStyle
काठमाडौंमा १८ वर्ष माथिलाई जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप दिइने, बिहिबारसम्म लगाइने
कोरोना भाइरस विरुद्धको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप काठमाडौँ जिल्लामा १८ वर्षमाथिका सबैलाई लगाइएको छ । खोप अभियानमा काठमाडौँ जिल्लामा सोचेभन्दा कमले लगाएको र खोप बच्ने भएकाले १८ वर्षमाथिका सबैलाई खोप लगाइएको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण शाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेलले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ जिल्लामा ४४ वटा खोप केन्द्रबाट खोप लगाइएको छ । खोप भोलिसम्म लगाइने डा. पोखरलेले बताए । उनले जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपबारे नकारात्मक हल्ला भएपछि मानिसहरुले कम लगाएको हुनसक्ने भन्दै खोपले कुनै नकारात्मक प्रभाव नपार्ने समेत जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साउन ४ गते खोप अभियानको शुभारम्भ गरेका थिए । साउन ७ गतेसम्म लगाइने खोप सुरुमा ५० देखि ५४ वर्ष उमेरसमूहका नागरिकलाई दिइने भनिएको थियो । अमेरिकाले नेपाललाई १५ लाख ३४ हजार ८५० मात्रा जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत यही असार २८ गते अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो ।